कर्णाली चिनाउन ‘कर्णाली उत्सव’ फागुन १९ देखि सुर्खेतमा – Enayanepal.com
कर्णाली चिनाउन ‘कर्णाली उत्सव’ फागुन १९ देखि सुर्खेतमा
२०७६, ७ फाल्गुन बुधबार मा प्रकाशित
फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म सुर्खेतको बुलबुले उद्यानमा कर्णाली उत्सव हुने भएको छ । सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनले विभिन्न व्यक्ति तथा निकायसंग सहकार्य गरी उक्त उत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो ।
बौद्धिक बहस हुने यस्तो कार्यक्रम कर्णालीमै पहिलोपटक सञ्चालन हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ । उत्सवमा प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ । कार्यक्रममा साहित्यका अलावा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक विषयमा बहस हुन्छ । ‘कुडा कर्णालीका’ मुख्य नारा रहेको उक्त उत्सवले वास्तविक कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने उद्धेश्य लिएको कर्णाली उत्सवका संयोजक कमलराज लम्सालले बताए ।
उत्सवमा देशविदेशमा रहेका कर्णालीप्रेमी चर्चित साहित्यकार, कलाकार, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवि एवं विशिष्ट व्यक्तित्वलाई वक्ताका रूपमा आमन्त्रित गरिने आयोजकले जनाएको छ । सयौं वक्ता र हजारौं दर्शक सहभागीहरुबीच हुने उक्त अन्तरकृयाले कर्णालीको मौलिक इतिहासलाई कोट्याउने, कर्णालीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने तथा अबको बाटो देखाउन सहयोग गर्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ । ‘हाम्रो कुरा हामीले नै गर्ने हो । हामीले नगरे अरु कसैले पनि गर्दैन ।’ आयोजक समिति सदस्य दिनेश गौतमले बताए ।
उत्सवको पहिलो दिन ‘सरकारका तीन तह ः बगाउन्या कर्णालीका बह’ शीर्षकको सेसन रहनेछ । जसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच बहस हुनेछ । उक्त सेसनमा संघीय तहहरुबीचको आपसी सम्बन्ध, गाँउगाँउमा सिंहदरवार पुग्यो वा पुगेन? तीन तहका सरकारबीच स्रोत‐साधनको बाँडफाँट तथा संघीयता र समृद्धि लगायतका विषयवस्तुमाथि विमर्श हुने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशका सरकारी प्रतिनिधिहरुबीच बहस हुने भएको छ । कर्णाली आसपासका सूदुरपश्चिम र प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुबीच अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा बहस गर्ने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ । पत्रकार निर्मला शर्माले सञ्चालन गर्ने उक्त छलफलमा तीन प्रदेशबीचको भू‐राजनीतिक सम्बन्ध, विकास अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य, साझा समस्या र समाधान लगायतका विषयमा बहस हुनेछ ।
उत्सवमा सिमान्तकृत समूदायको अवस्था, समानता र सहभागिता तथा नेतृत्वमा पहुँचबारे छलफल हुनेछ । सिमान्त स्वर नामक उक्त सेसनमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, मोहमदी सिद्धिकी, दुर्गा शोब र चन्द्रकिशोर झाले बहस गर्नेछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । तर कर्णाली उत्सवमा कर्णालीको एघारौं जिल्लामाथि बहस हुनेछ । आखिर कुन हो त ११ औं जिल्ला? उक्त सेसनमा नेपालकै एकमात्र घुमन्ते जाति राउटे समूदायबारे छलफल गरिनेछ । कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास नगर्ने राउटेको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेशकै महत्वपूर्ण विषय हो । सेसनमा लोपोन्मुख राउटे जातिको अवस्था, जीवनशैली, सामाजिक रुपान्तरण, राज्यको दायित्व लगायतका विषयमाथि बहस हुनेछ ।
उत्सवमा प्रदेशको विकासको वर्तमान अवस्था, पछाडि पारिनुका कारण, अबको बाटो, सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा नागरिकहरुले प्रश्न गर्नुपर्ने कारण लगायतका विषय समेटेर प्रश्न किन गर्ने? भन्ने सेसन निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रका मुख्य आधार, लगानीका प्रमुख क्षेत्र, कर्णालीमा लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ? जस्ता विषयले पनि उत्सवमा स्थान पाउने छन् ।